यसरी क्षेत्र बाँड्दै छन् एमाले-माओवादीः कुन जिल्लामा कसले कति पाउँदैछन् ? « Light Nepal
यसरी क्षेत्र बाँड्दै छन् एमाले-माओवादीः कुन जिल्लामा कसले कति पाउँदैछन् ?
Published On : 12 October, 2017 9:53 am
काठमाडौं, २६ असोज । एमाले-माओवादी वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको क्षेत्र भागबन्डा अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन् । दुवै पक्षले दाबी गरेका क्षेत्रबारे गहन छलफल गरेर जिल्लागत रूपमा भागबन्डा लगाउन थालिएको नेताहरूले बताएका छन् । मंगलबारसम्म सोलोडोलो छलफल गरेका उनीहरूले बुधबारबाट भने जिल्लागत रूपमा क्षेत्र टुंगो लगाउन थालेका हुन् ।
यी दुई दलले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा ६० र ४० प्रतिशत उम्मेदवार लिएर निर्वाचन लड्ने समझदारी गरेका थिए । अाजको अन्नपूर्णमा खबर छ-त्यही आधारमा क्षेत्र बाँडफाँट गर्न बसेको कार्यदलले बुधबारबाट भने प्रदेश १ का जिल्लाको क्षेत्र बाडफाँट टुंगो लगाउन सुरु गरेको कार्यदल सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताए। ‘केही जिल्लाको हामीले टुंगो लगाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अन्य जिल्लामा पनि प्रदेशस्तरबाट टुंगो लगाउँदै जान्छौं ।’